शरीर तौल सुचक
तपाईको शरीरमा बोसोको मात्रा कति छ भनेर पत्ता लगाउने एक माध्यम हो तपाईको शरीर तौल सुचक । यो सुचक तपाईको तौल (के.जी) लाई उचाइ (मिटर) को वर्गफलले भाग गरेमा निकाल्न सकिन्छ ।
उदाहरणको लागि यदि तपाई ७० के.जी. हुनुहुन्छ र उचाइ १.७५ मि. अग्लो भने हुनुहुन्छ भने तपाईको शरीर तौल सुचक ७०÷१.७५ x १.७५ = २२.९ हुन जान्छ ।
कयौं रोगहरु जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पक्षघात, मुटुरोग क्यान्सर, क्षयरोग, महिनावारी गडबडी, श्वासप्रश्वासको समस्या र मानसिक रोग आदि बढी तौल भएका र मोटा व्यक्तिहरुमा अत्याधिक भेटिने गर्दछन् ।
तौल घटाउँदा हुने फाइदाहरु
यदि कुनै मोटो मान्छेले शरीरको ५–१० प्रतिशत सम्म मात्र भएपनि तौल घटाउन सक्छ भने उसको स्वास्थ्यमा निकै सुधार देखिन सक्छ ।
क) माथि उल्लेखित रोगहरु देखिने खतरा कम भएर जान्छ ।
ख) यदि माथि उल्लेखित रोगहरु लागेर औषधी सेवन गरिराख्नु भएको छ भने औषधीको मात्रा कम खानु पर्ने हुन जान्छ ।
ग) अल्पायुमा ज्यान जाने खतरा २० प्रतिशतले घटेर जान्छ किनभने मुटुरोग, पक्षघात र मोटोपनासँग सम्बन्धित क्यान्सरहरु लाग्ने खतरा नै कम हुन्छ ।
तौल कसरी घटाउन सकिन्छ ?
क) उत्प्रेरणा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
ख) आहारविहारमा अत्याधिक सुधार ल्याउनु पर्दछ ।
तपाईले हप्ताभरी अहिले खाँदै आएका सम्पूर्ण खानेकुराहरुको सूची बनाउने र त्यसबाट हप्तामा तपाईले कति क्यालोरी उपभोग गर्नुहुन्छ त्यो हिसाब निकाल्नु पर्दछ। त्यसपछि के पुष्टि हुन्छ भने तौल घटाउनको लागि तपाईले अहिले लिदै गरेको खानेकुरा भन्दा कम खानुपर्र्ने हुन्छ ।
स्वस्थ सन्तुलित खाना खानुपर्दछ
१) एक दिनमा कम्तीमा पनि ५ पटक जति विभिन्न प्रकारका फलफूल र सागसब्जी खानुपर्दछ । धेरै लामो समयसम्म खाली पेट बस्नुहुँदैन । खाली पेटमा चिया खानुहुँदैन जसले गर्दा ग्यासट्राइटिस हुन्छ ।
२) प्राय धेरै खानाहरुमा रेसादार वस्तु भएमा राम्रो हुन्छ जस्तै: (गहुँ, कोदो, आलु, चामल) र साथमा फलफूल र सागसब्जी ।
३) मोटो मासुहरु, चिल्लो भएको दूध, चीज, झानेको वा तारेको खानाहरु सकेसम्म नखाने । कम चिल्लो भएका तेलहरु प्रयोग गर्ने ।
४) हप्तामा २–३ पटक माछा खाँदा राम्रो हुन्छ । माछाभित्र भएको चिल्लो लाभदायक हुन्छ ।
५) मासु खाँदा सकेसम्म सेतो मासु जस्तै कुखुराको मासु बढी प्रयोग गर्ने ।
६) यदि खाना तार्नु परेमा वनस्पति तेलहरु जस्तै भटमास, सूर्यमुखी वा ओलिभ तेलको प्रयोग गर्ने ।
७) खानामा बढी नूनको प्रयोग नगर्ने र नुनिला खानेकुरा सकेसम्म नखाने ।
खाना दिनको तीनपटक खाँदा उत्तम हुन्छ । खाना विस्तारै खानुपर्दछ । खाना खान छुटाउनु भएमा तपाईलाई बढी भोक लाग्छ त्यसपछि तपाई खानाको बारेमा धेरै सोच्नुहुनेछ र बेलुका बढी खाना खान पुग्नुहुनेछ त्यसैले खाना सकेसम्म समयमा नै खाने र नछुटाउने । बीचबीचमा नास्ता खाने बानी छोड्नुपर्दछ र यदि रक्सी पिउनुहुन्छ भने विस्तारै छोड्नु पर्दछ ।
यदि सक्नुहुन्छ भने कम्तीमा ६०–९० मिनेट हप्ताको ५ दिन कसरत गर्नु उत्तम हुन्छ । सबैलाई कम्तीमा ३० मिनेट कसरत गर्नु लाभदायक हुन्छ तर यदि तपाई तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने ६०–९० मिनेट कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शरीरले गर्मी महसुस गर्नेगरी छिटोछिटो सास पर्ने गरी र अलिकति पसिना आउने गरी व्यायाम गर्नु पर्दछ जस्तैः छिटो छिटो हिड्ने, नाच्ने, उफ्रने, पौडिने, व्याडमिन्टन, टेनिस, डोरी आदि खेल्ने ।
तपाइको दिनचर्यामा पनि सुधार ल्याउनु आवश्यक हुन्छ जस्तै लिफ्टको सट्टा सिढीबाट हिड्ने, काममा जाँदा हिडेर वा साइकलमा जाने इत्यादि ।
तौल विस्तारै घटाउनु पर्दछ
छिटो छिटो तौल घटाउनु हानीकारक हुनसक्छ ।
हप्तामा करिव ०.५– १ किलो तौल घटाउनु उचित हुन्छ । यसको लागि तपाईले पहिलाको भन्दा ५०० देखि १००० क्यालोरी दिनहुँ कम खानु पर्दछ । यदि यस्तै गर्नुभएमा ६ देखि १२ के.जी तौल ३ महिना भित्रमा घट्नुहुनेछ ।
कुनैकुनै अवस्थामा औषधीले पनि तौल घटाउन एउटा उपाय हुनसक्छ तर जवसम्म तपाईले खानाको मात्रामा कमी ल्याउनु हुन्न औषधीले केही गर्न सक्दैन । यदि तपाई अतिनै मोटो हुनुहुन्छ भने अप्रेसनबाट पनि तौल घटाउन सकिन्छ ।
चुरोटले तपाईलाई मुटुरोग लाग्ने खतरा २ गुणाले बढाइदिन्छ । साथै विभिन्न क्यान्सरहरु र अन्य फोक्सो र मुटुको रोग लाग्ने खतरा पनि बढेर जान्छ । चुराट खान छोड्ने वित्तिकै यो खतरा न्यून हुन जान्छ । त्यसैले यदि तपाई चुरोट खाने गर्नुभएको छ भने अहिले नै बन्द गर्नुहोस् । यदि सक्नुहुन्छ भने डाक्टरसँग सल्लाह माग्नुहोस् ।
अत्याधिक रक्सी खाने बानी तुरुन्त बन्द गर्नुपर्दछ ।
तपाईं अहिले यहाँ हुनुहुन्छ : गृहपृष्ठ स्वास्थ सम्बन्धि जानकारी मोटोपना सम्बन्धी जानकारी